सिंगो राजनिती तरं’गित हुने गरि, प्रचण्डले राखे – नयाँ प्रस्ताव ! – Points Nepal
सिंगो राजनिती तरं’गित हुने गरि, प्रचण्डले राखे – नयाँ प्रस्ताव !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०६, २०७८ समय: १३:५१:३७
नेपालको सिंगो राजनितीक क्षेत्रनै तरंगित हुने गरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् ।
संविधान अनुसार वैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता छ । संविधानले नेतृत्व विहिन स्थानिय तहको परिकल्पना गरेको छैन तर प्रचण्डले बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचनको सट्टा संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावले राजनिती तरंगित भएको छ ।
एक अनलाइन सँगको अन्तवार्तामा प्रचण्डले यस्तो बताएको दाबी गरिएको छ । प्रचण्डको हवला दिँदै प्रकाशित समाचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिएको कारण देखाइ बैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
प्रचण्ड सँगको विस्तृत अन्तवार्ता प्रकाशित भएको छैन तर उनले दिएको स्टेटमेन्टले राजनिती तरंगित बन्ने अवस्था आएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनको तरुप फाल्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रचण्डले आफुले यस्तो प्रस्ताव गठबन्धनमा पनि राखिसकेको बताएका छन् ।
एमालेले लगातार सदन अवरोध जारी राखेको र उसको उद्देश्य नै यो संसद्लाई सफल हुन नदिने भएकाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । चुनाव बाट एमालेलाई पत्तासाफ पारेर मात्रै स्थानिय तहको निर्वाचन गरिनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव उनको रहेको बताइएको छ ।
प्रचण्डले आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भएकाले पहिले संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउने बताएका हुन् । यस अघि उनले तीनै तहको चुनवा एकै चोटी गर्न प्रस्ताव राख्दै आएका थिए ।
प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावले राजनिती नयाँ कोर्समा जान सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तत्काल स्थानिय तहको निर्वाचनको मिती घोषणा गर्न माग गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काग्रेस भित्र बैशाखमै स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने मत बलियो देखिन्छ ।
Last Updated on: January 20th, 2022 at 1:51 pm